Manta • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Manta dia tanàna antonony ao amin'ny Faritanin'i Manabí, Ekoatera. Io no tanàna be mponina indrindra amin'ny faritany, ny tanàna fahadimy ao amin'ny firenena. Manta dia efa nisy talohan'ny andron'i Columbian. Varotra varotra ho an'ny Mantas izany. Raha ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2001 dia 192,322 ny tanàna.